Amin'ny raharaham-barotra fanondranana, ny vokatra hazo ROCPLEX dia voamarin'ny IS09001: 2000, IS014001: 2004, CE, FSC, BFU, JAS-ANZ ary amidy amina firenena mihoatra ny 100 eran'izao tontolo izao, toa an'i Alemana, Aostralia, Etazonia, Chile, Libya, Emirà Arabo Mitambatra, Arabia Saodita, Korea, Japon, sns.
Ao amin'ny tsena eo an-toerana any Shina, marika malala ao an-toerana an'ny ROC malaza any amin'ny tranokala fananganana sinoa sy tsena haingon-trano.
Nahazo ny voninahitry ny "Marika Famantarana malaza sinoa", "vokatra azo itokisana kalitaon'ny Jiangsu" ary "Credit Corporate AAA".
Miaraka amin'ny tanjon'ny fikolokoloana ny takian'ny tsena manerantany, dia niara-niasa tamin'ny mpivarotra ambongadiny malaza sy mpivarotra ambongadiny izahay, tompon'andraikitra amin'ny famolavolana sy OEM ho an'ny tontonana hazo sy fanaka misy azy ireo.
Manondrana sy manafatra